Happy Easter to you All! | Shwe Canaan TV
00Truth Thursday, 17 April 2014
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ Ruth Dillow ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ပင်တဂွန်စစ်ဌါနချုပ် မွ သတင်းဆိုးတစ်ခုကို မမျှော်လင့...
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ Ruth Dillow ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ပင်တဂွန်စစ်ဌါနချုပ် မွ သတင်းဆိုးတစ်ခုကို မမျှော်လင့်ဘဲကြားလိုက်ရတယ်။ သတင်းကတော့ သူရဲ့ချစ်လှစွာသောသား Clayton Carpenter ဟာ ကူ၀ိတ် နိုင်ငံရဲ့ စစ်မြေပြင်မှာ မြေမြှပ်မိုင်း နင်းမိပြီး သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပါဘဲ။ Ruth Dillow ဟာ ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းဆိုးကြောင့် သုံးရက်တိတိ ငိုကြွေးခဲ့ရပါတယ်၊ သုံးရက်တိတိ မိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုး များရဲ့ နှစ်သိမ့်ခြင်း အားပေးခြင်းတို့ကို ခံယူရရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးရက်မြောက်နေ့မှာ တယ်လီဖုန်းမြည်လာပြီး သူ၏သားဖြစ်သူက အေမ ကျွန်တော်မသေဘူး၊ ကျွန်တော်အမေ့သား Clayton ပါ၊ အမေကြားရတဲ့သတင်းထဲက သေသွားတဲ့သူက သားမဟုတ္ဘူး၊ အခြားတစ်ယောက်ပါ ဟု ဖုန်းထဲမှ သားဖြစ်သူ၏ နှုတ်ဆက်သံကို ကြားလိုက်ရသောအခါ၊ သူမသည် ချက်ချင်း သူ့နားကိုပင် မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ပါ၊ သို့သော် သားဖြစ်သူ၏အသံကို သူမဘယ္လိုမွ မမှားနိုင်ပါ။
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပင် သားဖြစ်သူ မသေသေးကြောင်း အခိုင်အမာသိရှိနားလည်သွားချိန်တွင် သူမ၏ပျော်ရွှင်မှုကြောင့် ကခုန်၊ ရယ်မောလျက် သူမ၏သုံးရက်တာ ၀မ်းနည်းပူဆွေးမှုမှသည် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးအတွက် အပျော်ဆုံးနေ့ တစ်နေ့ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ထိုနေ့တွင် သူမဘယ်လောက်ပျော်ရွင်ခဲ့ရသည်ကို ဘယ်သူမှနားလည်၊ ခံစားပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ဟု သူ၏ပျော်ရွှင်မှုကို ပြန်လည်ဖွင့်ဟခဲ့သည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို ဖတ်ရှုနားလည်ပြီး ခရစ်တော်ကို ချစ်တဲ့ ယုံကြည်သူတိုင်းအတွက် Ruth Dillow ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကို ခံစားဘူးကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ လက်တော်နဲ့ ဖဝါးတော် မ်ားကို ကားတိုင်ပေါ်မှာ ရက်ရက်စက်စက် သံမှိုနဲ့ ရိုက်ပြီး နံရိုးတော်ကို လှံတံနဲ့ ထိုးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ခရစ်တော်ရဲ့ မိခင်၊ သူ့ကိုချစ်တဲ့ နောက်လိုက်တပည့်တွေ ဘယ်လောက်ထိအောင် ပူဆွေးသောက၊ ၀မ်းနည်းနာကျင်မှုကို ခံစားရမလဲဆိုတာပြောမပြလည်း နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာ ခရစ်တော်ကို ဂူသွင်းမြှပ်နှံတဲ့ နေရာကို မယ်တော်နှင့် အမျိုးသမီးအချို့သွားရောက်တဲ့အခါ၊ ဂူကိုပိတ်တဲ့ ကျောက်တုံးကြီး မရှိတော့တဲ့အပြင် အထဲကို၀င်ကြည့်တော့ ခရစ်တော်ရဲ့ အလောင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူး၊ တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ ကောင်းကင်တမန်များ ပေါ်လာပြီး ခရစ်တော် ထမြောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မယ်တော်နှင့် အမျိုးသမီးများကို ပြောပါတယ်။ မိတ်ဆွေ ခရစ်တော်ဟာ သေခြင်းကို အောင်မြင်ပြီး သင်္ချိုင်းတွင်းမှ ပြန်လည်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စေပါသလဲ?
၁ကော ၁၅း၂ တွင် အထက္က ငါဟောပြော သည်အကြောင်းများကို သင်တို့ သည် အကျိုးမဲ့မယုံဘဲ စိတ်စွဲလန်းလျှင်၊ ထိုဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။ ဟုဖော်ပြသည်။ တဖန်
၁ကော ၁၅း၃-၇ တွင် ငါသည် ကိုယ်တိုင်ခံယူသည်အတိုင်း သင်တို့အား ရှေ့ဦးစွာအပ်ပေးသော အကြောင်းအရာဟူမူကား၊ ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏။
သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှ၊ ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်တော်မူ၏။
ကေဖသည် ကိုယ်တော်ကိုမြင်ပြီးမှ၊ တကျိပ်နှစ်ပါးသောသူတို့သည် မြင်ရကြ၏။
ထိုနောက် ညီအစ္ကိုငါးရာမက၊ တပြိုင်နက်မြင်ရကြ၏။ ထိုသူတို့တွင် အများသောသူတို့သည် ယခု တိုင်အောင် အသက်ရှင်ကြသေး၏။ အချို့တို့သည် အိပ်ပျော်ကြပြီ။
ထိုနောက် ယာကုပ်မြင်ရ၏ ဟုရေးသားထားသည်။
တဖန် ၁ကော ၁၅း၅၁-၅၂ တွင် နက်နဲသောအရာတခုကို ငါပြဦးမည်၊ ငါတို့ရှိသမျှ သည် အိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်။ သို့သော်လည်း၊ နောက်ဆုံးသောတံပိုးမှုတ်သောအခါ၊ တခဏခြင်းတွင် မျက်စိတမှိတ်၌ ငါတို့ရှိသမျှသည် ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ရကြမည်။ ထိုတန်ပိုးမှုတ်ချိန် ရောက်သောအခါ သေလွန် သောသူတို့သည်၊ မပုပ်နိုင်သောအဖြစ်၌ တည်လျက် ထမြောက်၍၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ရကြမည် ဟုတွေ့ရသည်။
တမန်တော်ရှင်ပေါလု ဖော်ပြသကဲ့သို့ သခင်ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့် အရာခပ်သိမ်းတို့သည် အရင်ကနှင့်မတူ ပြောင်းလဲကုန်ကြလေပြီ။ ယုတ်ရွအဆုံး ကားတိုင်နှင့်သင်္ချိုင်းဂူ တို့အပေါ်လူသားတို့၏အမြင်များပင်လျှင် သခင်ယေရှု၏ ထမြောက်ခြင်းနောက်ပိုင်းတွင် ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။
ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း မဖြစ်ခင် လက်ဝါးကားတိုင် ဟူသည် အမင်္ဂလာ၊ သေခြင်း၏အမှတ် လက္ခဏာဖြစ်ရုံမက အဆိုးဆုံးသော သေခြင်း၊ ကွပ်မျက်ခြင်းခံရသောနေရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရောမအင်ပါယာအတွင်းတွင် ရောမနိုင်ငံသားတစ်ဦးကို လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် ကွပ်မျက်ခြင်းကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည်။ လက်ဝါးကားတိုင်သည် အနိမ့်ဆုံးသောသူ၊ ကျွန်၊ ရောမအင်ပါယာ၏ ရန်သူများအတွက် ကွပ်မျက်ရာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ သို့သော် အမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည် ဆိုသော ထို လက်ဝါးကားတိုင် သည်ယနေ့ စိတ်ချမ်းမြေ့မှုကို ပေးနိုင်စွမ်းသော လက္ခဏာ အဖြစ် ယုံကြည်သူရော မယုံကြည်သူများပါ နားကပ်၊ ဆွဲကြိုး မွအစ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် အမြတ်တနိုးထားသော၊ မျှော်လင့်ခြင်းကိုပေးသော၊ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအမှတ်ရစေသော အမှတ်အသားတစ်ခု ဖြစ်နေသည်။
ယေရှုခရစ်တော် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအမှုမဖြစ်ပွါးခင်တွင် ဂူသင်္ချိုင်း ဟူသည် လူ့ဘ၀၏ လမ်းဆုံး၊ နိဂုံးပြုရာ နေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ယေရှုခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ယနေ့ထို ဂူသင်္ချိုင်းသည် သေခြင်း၏အခြားသော တဖက်ခြမ်း၌ရှိသည့် ပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသော၊ စစ်မှန်သော၊ ထာ၀ရဖြစ်သော ဘ၀၏ အစ၊ ထာ၀ရပျော်ရွှင်ခြင်းတည်းဟူသော နိဗ္ဗန် ၏ နိဒန်းအဖြစ် ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တိုင်းက ခံယူကြပေသည်။ ထာ၀ရ ပျော်ရွှင်မှုရှိရာ မရောက်မချင်း လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တွေရဲ့စေစားရာနောက် မမောမပန်း လိုက်လျှောက်နေကြရတယ်မဟုတ်လား။ Dale Even ဆိုသူက ဟိုး..အေ၀းမှာမြင်ရတဲ့ တဲ့တန့် ရောင်ခြည်ရဲ့ ခြေရင်းမှာရှိတဲ့ ရွှေအိုးကိုရှာဖွေဖို့ ကျွန်တော့် ဘ၀ရဲ့ အချိန်တော်တော်များများကို အသုံးပြုခဲ့မိတယ်၊ နောက်ဆုံး အဲဒီရွှေအိုးကို တဲ့တန့်ရောင်ခြည်ရဲ့ ခြေရင်းမှာ မတွေ့ဘဲ၊ ကားတိုင်ရဲ့ ခြေရင်းမှာတွေ့ခဲ့ရတယ် ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ လောကကြီးမှာ ရှင်သန်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံး ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးတယ် လို့ ယူဆ ခံယူထားတဲ့ အရာ၀ထၳုတွေရဲ့နောက်ကို တကောက်ကောက်လုံးပမ်းရှာဖွေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သေခြင်းဆိုတဲ့တရား၊ သေခြင်းရဲ့အခြားတဖက်မှာ လျှောက်လှမ်းတွေ့ကြုံရမယ့် တရားတွေနဲ့ အပေးအယူလုပ် ရတော့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဘ၀အတွက် အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ ခံယူသတ်မှတ်ထားတဲ့၊ လုံးပမ်းရှာဖွေထားတဲ့ လောကအရာ၀ထၳုတွေဟာ ဘာမှအရေးပါတဲ့အရာတွေ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မိတ်ဆွေစီးတဲ့ကားကောင်း၊ မိတ်ဆွေနေတဲ့ အိမ်ကြီးတွေက ထာ၀ရလျှောက်လှမ်းရမယ့် အခြားသောတဖက်ကို ဘယ်လိုကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးကိုမှ မဖန်တီးပေးနိုင်ပါဘူး။
Henry Garrity ဆိုသူရေးသားသော Portraits of Perseverance ဆိုသော စာအုပ်တွင် တစ်ခါက Carl ဆိုသူတစ်ယောက်သည် အလွန်ချမ်းသာသော သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ရာ၊ အလွန်ကြီးသော အိမ်နှင့် မြေကွက်များကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ သူ၏အနှစ်သက်ဆုံး အချိန်ဖြုံးနည်း တစ္ခုမွာ မြင်းစီးရင်း သူပိုင်ဆိုင်သည့် မြေကွက် မ်ားကို လျှောက်ကြည့်ကာ၊ သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ် ကြည်နူးပီတိဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်နေ့ Carl သည် မြင်းစီးရင်း သူ၏မြေကွက် တစ်နေရာရှိ တဲကလေးတစ်ခုတွင် ငှားရမ်းနေထိုင်သော Han ဟုအမည်ရသည့် လယ်သမားတစ်ယောက် ကိုတွေ့သည်။ နေ့လယ်စာ စားချိန်ဖြစ်ပြီး Han သည် သစ်ပင်တစ်အောက် အရိပ်တွင် စားပွဲသေးသေး တစ်လုံးနှင့် နေ့လယ်စာစားရန်အတွက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း ဆုတောင်းနေသည်။ Carl က Han ၏နေ့လည်စာကို ကြည့်လိုက်ရာ ပေါင်မုန့်ကြမ်းများနှင့် ချီစ် အနည်းငယ်ကိုသာ တွေ့သဖြင့်၊ အဲဒီ အစားအစာ ကလေးအတွက်နဲ့များ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေရသေးတယ် ဟု နာခေါင်းရှုံ့ ကာ ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုလိုက်သည်။ Han က ဒီအစားအစာ ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် လုံလောက်တယ်၊ ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ အစားအစာ ဖြစ်တယ်ဟုပြန်ပြောသည်။
Han ၏ ပြန်လည်ချေပပြောဆိုမှု မည်သို့မျှ နားလည်နိုင်စွမ်း ရှိပုံမရသော Carl သည် ရုတ်တရက် လည့်ပြန်မည် ပြုစဉ် Han က နေပါအုန်း. . . ကျွန်တော်ညက မက်တဲ့ အိမ်မက်ကလေးပြောချင်သေးတယ်၊ ညကကျွန်တော့် အိမ်မက်ထဲမှာ အလွန်လှပတဲ့ နေရာတစ်ကိုရောက်သွားပြီး ဒီည မင်းနေထိုင်တဲ့လွင်ပြင် တစ်ခုလုံးမှာ အချမ်းသာ ဆုံးသူ သေမယ် လို့ ကျွန်တော့်ကိုပြောသွားတယ် ဟု ပြောပြသည်။
Carl က အိမ္မက္ဆိုတာ မက်ချင်တိုင်းမက်တာပါ ဟုမကျေမချမ်းပြောလိုက်သည်။ သို့သော် အပြန်လမ်း တစ်လျှောက်လုံး Han ၏စကားက သူ၏အတွေးအာရုံအားလုံးကို စိုးမိုးတွယ်ညှိလာသည်။ အိမ်ရောက်သော အခါ လက်သုံးတော်ဆရာ၀န် အားအမြန်ဆုံးခေါ်ပြီး Han ပြောပြသော အိမ်မက်များကို ပြန်ပြောပြပြီး သူ၏အတွေးအာရုံတစ်ခုလုံးကို ဖမ်းဆွဲချုပ်ကိုင်နေသော စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ပြောကာ တစ်ကိုယ်လုံး ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခိုင်းသည်။ ကျွန်တော် ဒီည တကယ်သေမယ်လို့ ထင်ပါသလား ဟု အကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းသည်။ စစ်ဆေးမှု ပြီးသောအခါ ဆရာ၀န္က ကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းကြောင်း ဘာမွ်စိတ္ပူစရာ မရှိကြောင်း ပြောပြသည်။
နောက်တစ်ရက်မနက် အိပ်ယာမှ ထသောအချိန်တွင် အိမ်တံခါးခေါက်သံကြားရသဖြင့် သွားဖွင့်ရာ၊ ဆင်းရဲသား လယ်သမားလေး Han တစ်ယောက် ညကဆုံးသွားကြောင်း တစ်စုံတစ်ယောက်က သတင်းပို့လာသည်။ ဟုတ်ပါတယ်. . . Han တစ်ယောက် အိမ်မက်ထဲမှာ ကောင်းကင်သားပြောသွားတဲ့ အချမ်းသာဆုံးသူဌေးဆိုဒါ သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေပါတယ်။ လောကမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ဘယ်လောက်များနေပါစေ၊ အဖဘုရားသခင်အတွက်တော့ အချမ်းသာဆုံးသူဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ။ ဘုရားပေးတဲ့ အရာတွေနဲ့ ကျေနပ် နှစ်သိမ့်နိုင်သောသူသာလျှင် ဘုရားသခင်အတွက် အချမ်းသာဆုံးသောသူပါ။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်ခင်က လောကအရာများသည် အရေးကြီခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အခုတော့ ဘာမျှမဟုတ်တော့ပါ။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်ခင်က သေခြင်းတရားဟာ လူ့ဘ၀ကြီးရဲ့ အဆုံး၊ နိဂုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် အခုတော့ ထာ၀ရရှင်သန်ခြင်းရဲ့ နိဒါန်းပါ။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်ခင်က လူ့လောကကြီးဟာ ဆင်းရဲခြင်း၊ ဒုက္ခ၊ သုက္ခ များနဲ့ ပြည့်နဲ့နေတဲ့ ကမ္ဘာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် အခုတော့ လောကအရာ တွင်ဘာမျှမပိုင်ဆိုင်သောသူပင်လျှင် မျှော်လင့်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ၀မ်းမြောက်ခြင်း များနဲ့ပြည့်၀တဲ့ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်သောသူများဖြစ်လေကြပြီ . . .။
စာဖတ်သူအပေါင်း သခင်ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ပျော်ရွှင်၀မ်းမြောက်စွာဖြင့် ရရှိခံစားရပြီး သခင်ယေရှုနှင့်အတူ ပြန်လည် ရှင်ပြန်ထမြောက်သောသူ အသီးသီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေဟု ဆန္ဒပြုရင်း.
Melvin Newland ၏ Easter whatadifference! ကို ကိုးကားထားပါသည်။
Calvary Burmese Church မှကူးယူပါသည်..
Shwe Canaan TV: Happy Easter to you All!